Matipi ekuvandudza kuchengetedzeka kwewebsite yako | ECommerce nhau
Matipi ekuvandudza kuchengetedzeka kwewebhusaiti yako
Chimwe chezvinangwa zvako zvakakosha kubva ikozvino kuenda mberi ndechekupa dziviriro yewebhu kuitira kuti iwe usave nerudzi rwe zviitiko mumabhizimusi ako epamhepo. Nekuti usakanganwa kuti chero kukundikana kunogona kureva mari yakawanda uye mune chero mamiriro ezvinhu kupfuura zvaunogona kufanoona kubva pakutanga. Kuti uwane ichi chinangwa chakamirirwa kwenguva refu, tiri kuzokupa mitemo yekuita iyo inoita kuti iwe utevedzere ichi chishuwo uye pamusoro pemamwe marudzi ekufunga.
Kuchengetedzwa pane webhusaiti yekambani yako kunofanirwa kuve chinangwa chekutanga nekuti hapana chimwe chinopfuura bhizinesi rako repamhepo chiri panjodzi. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti nenzira iyi chii pakupera kwezuva ratichazokupa iwe kudzidzisa dzimwe nzira dzakareruka dzatinogona kushandisa pane webhusaiti yedu, kugadzirisa kuchengetedzeka kwayo uye kweavo vese vashandisi vanoishanyira.
Nekuti zvirizvo, haugone kukanganwa kuti mamiriro aya anowanzo gadzira yakaipa mufananidzo, nekuti zvinowana ruzivo rwakakanganiswa zvesaiti uye zvakare kune vashanyi vanoiwana. Iine iko chaiko mukana wekuti zvimwe zviitiko zvinoitika zvinozopedzisira zvichikanganisa kuvandudzwa kwechitoro chako chepamhepo kana commerce. Semuenzaniso, iwo atiri kuzokuratidza pazasi:
1 Kuchengetedzwa kwewebhu: isa zvitupa zvekuchengetedza
3 Chikumbiro chekuvandudza
4 Enda kunochengetedza mapeji
5 Isa SSL system
6 Enda kune inomiririra iyo inokupa iwe yakawanda chengetedzo
7 Gadzira kopi yekuchengetedza
Kuchengetedzwa kwewebhu: isa zvitupa zvekuchengetedza
Izvi pasina kupokana chiyero chekutanga chaunofanira kushandisa pane webhusaiti. Mupfungwa iyi, kushandiswa kwezvitupa zvekuchengetedza kwaisazogonesa iyo kuchengetedzwa kwenzvimbo yedu, asi zvaizobatsira kugadzirisa kuchengetedzeka kweruzivo rwunofamba narwo, kunyanya mumabhizinesi emagetsi uko kunonyanya kutumirwa data remushandisi.
Rudzi urwu rwechengetedzo chitupa, zvazvinoita iko kunyorera ruzivo rwunotumirwa kuburikidza newebhu peji, kudzivirira mumwe munhu anokanganisa traffic kubva pakubvisa data rakatumirwa, kunze kwekunge ivo vawanawo kiyi yekunyorera. Nekuitwa kwayo iwe unodzivirira izvo kubva zvino zvichienda zvishoma mashoma anodikanwa mamiriro anogona kumuka. Nekuvhiringidzika zvine musoro izvo zvinogona kukonzeresa mune rako rehunyanzvi chiitiko chero nguva.
Sezvo zvisinganzwisisike sezvazvinogona kuratidzika, havazi vese vanozviita. Kana uchitambura imwe mhando yekurwiswa iyo vabata yedu saiti, nzira yakachengeteka kwazvo yekuipedza ndeyokushandisa backup iyo yatakaita yeedu portal.
Aya ma backups anovimbisa zvakare kuti isu takachengetedza ruzivo rwedu muchiitiko chekutambura rumwe rudzi rwechiitiko chinotyisa. Ehe, usaite kopi pakombuta yako wega, asi pane imwe yekunze svikiro iyo inochengetwa mune imwe nzvimbo pane pane yatinayo sevha.
Pakupera kwezuva, kuisa backup ichava imwe yemhinduro dzakanakisa dzekudzivirira chero mhando dzezviitiko pawebhusaiti yako. Uye izvo pakupedzisira zvinogona kuve nemhedzisiro yakaipa pane rako bhizinesi. Nepo kune rimwe divi, chichava chiitiko chisingazokubhadhare iwe zvakanyanya kuedza kuzvitanga kubva zvino zvichienda mberi. Usazvibvunze neimwe nzira.
Iko hakuna chinhu chakachengeteka kupfuura kungoita izere yekuvandudza yezvishandiso zvinotorwa kubva kune matsva tekinoroji mapuratifomu. Nekuti mukuita, kana iri basa risingaitwe, vashandisi vanoratidzwa zvakanyanya kune zviitiko zvekuomarara kukuru munhau venhau. Ichi chinhu chakajairika uye kana ukasazviita unoisa panjodzi yekuti zvikwata zvako zvionekwe inobatwa nemavhairasi, malware uye imwe nhevedzano yematambudziko ayo pakupedzisira anozokanganisa zvakanyanya bhizinesi rako.
Ndichiri kune rumwe rutivi, dambudziko iri rinogona kugadziriswa nekureruka kuburikidza nemamwe mapurogiramu ekombuta. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti mune izvi zviitiko chichava chishandiso pachacho chinokuzivisa iwe kana vhezheni itsva yaburitswa, ichikukoka kuti uigadzirise. Naizvozvo, anenge ari iye anokunyevera kudambudziko iri nekureruka. Saka kuti nenzira iyi iwe wakagadzirira zvizere kuenderera nemabhizinesi ako mitsara zvakajairika.
Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kuwana nhamba hombe yemanyowani anotsanangura mhando iyi yekuita pawebhu. Pasina kutisanganisira isu chero yemari mari sezvazvinoitika nekubhadhara komputa zvirongwa. Iko kwaunofanirwa kubhadhara muripo kuti utore chigadzirwa ichi kuti uve nechokwadi chechero tekinoroji. Kubva pachedu makomputa kune nharembozha kana mapiritsi, kupa mashoma mashoma maenzaniso.
Enda kunochengetedza mapeji
Iyi ndeimwe yeimwe nzira dzinofanirwa kuitwa kuchengetedza zvido zvebhizinesi redu, muchitoro chedu kana kutengeserana kwepamhepo. Kubva pane ino maonero, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mupiro wayo mukuru mukuchengeteka uri muchokwadi chekuti vashandisi vanofanirwa kuendesa nzira inoda kuziva kwazvo Mune manyorerwo eainzi KYC iyo inoshandiswa zvakanyanya nemabhangi. Iyo iri zvakare mutariri wekusimbisa dhata redu nehukuru hwakanyanya. Saka hapana zvishamiso zvekupedzisira.
Iyo zvakare inomira kunze kwekuchengetedza dhata yevatengi munzira yakavharidzirwa yekusimbisa mashandiro avo. Kunge dhata kubva kumakadhi echikwereti kana echikwereti, haina kuchengetwa papuratifomu. Izvi zvinopa chengetedzo yakawanda kuitira kuti vasaendeswa kune vechitatu mapato. Nekubvuma kweiyo mazano akajeka, inoshanda kudzivirira kufamba kwese pamapeji ewebhu.
Kuti uve nechokwadi chekuti chikuva chakazara 100% chengeteka. Izvi zvinofanirwa kuve nhau dzakanaka kwazvo kune vashandisi vanoda kunyoresa kubva zvino zvichienda mberi.
Isa SSL system
Kune rimwe divi, hatigone kukanganwa kuti mashandisirwo ezvitupa zvekuchengetedza hazvigadzirise kuchengetedzeka kweruzivo rwuri kutsvaga mushandisi uye nekudaro vanogona kusvika pakuvimbika uchiziva kuti uri mune yakachengeteka uye yakavimbika saiti. Kwete chete kuona zvirimo, asi zvinopesana, kubhadhara izvo zvaunotenga muzvitoro kana online commerce.
Zvakanaka, pachinhu ichi chinofanirwa kuyeukwa panguva ino kuti rudzi urwu rwezvitupa zvekuchengetedza, zvazvinoita kunonyora ruzivo rwunotumirwa kuburikidza newebhu peji, ichidzivirira mumwe munhu anokanganisa traffic kubva pakubvisa dhata rakatumirwa, kunze kwekunge iri iyo zvakare inowana kiyi yekunyorera.
Neichi chikonzero, zvakakosha kuti hurongwa hwehunhu uhwu huiswe nekuti huchagadzirisa zvinopfuura rimwe dambudziko rinogona kukutungamira kuti urasikirwe nemari nenzira isingadiwe kune zvaunofarira mukambani. Zvakare nekupa chengetedzo huru kune vese vashandisi kana vatengi iwe vaunayo mune yako portfolio chero nguva yakapihwa. Kunyanya kana iwe ukakwanirisa chiyero ichi nevamwe icho chinopa kugona kukuru maererano nemhedzisiro yavo.
Enda kune inomiririra iyo inokupa iwe yakawanda chengetedzo
Nepo kune rimwe divi, zvisinganyanyo kukosha inyaya yekuti pakupedzisira chiyero chikuru chekuita webhusaiti ive yakachengeteka nharaunda kuve neyakavimbika yekutambira sevhisi. Vamwe vanopa vane maseva anoshaya mashoma ekuchengetedzwa kwekombuta, izvo zvinogona kuve nenjodzi kune vese bhizinesi redu nevashandisi varo.
Nekuti iwe unofanirwa kurangarira kuti hazvisi zvese kuitisa zvakafanana. Kana zvisiri, pane kudaro, pane misiyano diki iyo inogona kukuita iwe kuti usarudze imwe pamusoro pevamwe. Iri izano rinogona kubatsira zvakanyanya kubva panguva ino zvichienda mberi. Iko kune dambudziko hombe riri muchokwadi chekusarudza kuitisa iyo inokupa iwe kuvimba kwakanyanya panguva ino kupihwa kupihwa kukuru uko kunoitwa kubva mukirasi iyi yemakambani akabatana nehunyanzvi hutsva.
Nekuti pasina kupokana pekugara uye nhanho dzekuchengetedza idzo dziripo padanho rekuvimbika mudhatabhesi, akakosha ruzivo mukuchengetedza. Usakanganwe kubva zvino zvichienda mberi nekuti inogona kubatsira zvakanyanya uye kubatsirwa kubva kune ayo akakosha mabhenefiti.
Gadzira kopi yekuchengetedza
Iyi ndeimwe sisitimu inosangana neyako tarisiro zvinobudirira. Kubva pane ino maonero, usakanganwa kuti rese data mukati medhijitari nharaunda inogona kurasikirwa munguva dze emergency, ndosaka kugadzira backup makopi ewebhusaiti yako nguva nenguva kunogona kukubatsira kugadzirisa kumwe kunetseka.
Kugutsa ichi chakamirirwa kwenguva refu handidi chero chinhu chiri nani pane kuita chiito ichi nekugona kukuru uye nguva nenguva. Kune rimwe divi, kusakudziridza kunogona kukutungamira kune asingadiwe mamiriro ezvinhu kune ese mapato ari chikamu cheichi chiitiko. Kune izvo, iwe unofanirwa kunyora karenda pamazuva aunofanirwa kuisa ino dziviriro sisitimu yako webhusaiti. Sezvo pakupera kwezuva zvinogona kukuita kuti ubude mune rimwe dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Matipi ekuvandudza kuchengetedzeka kwewebhusaiti yako
Shopify inoshanda sei?
Zvakanakira eemail mushandirapamwe mudhijitari commerce?